Wasaaradda maaliyada Puntland oo baarlamaanka hor geysay miisaaniyada sanadka 2017 - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandWasaaradda maaliyada Puntland oo baarlamaanka hor geysay miisaaniyada sanadka 2017
Wasaaradda maaliyada Puntland oo baarlamaanka hor geysay miisaaniyada sanadka 2017
December 13, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Baarlamaanka ayaa maalmaha soo socda ka doodi doona miisaaniyada 2017-ka, kadibna waxay u qaadi doonaan cod. [Xuquuqda Sawirka: Puntland Post]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasaarada maaliyada dowladda Puntland ayaa maanta oo Talaado ah baarlamaanka hor geysay miisaaniyada sanadka soo socda ee 2017-ka.
Dhaqaale dhan $160, 5600,648 ayay wasaaraddu maaliyadu horgeysay baarlamaanka, iyaga oo ka doodi doona maalmaha soo socda, kadibna cod u qaadi doona.
Dakhli koror ayaa sanadkan ka muuqda miisaaniyada Puntland, iyadoo dhaqaale laga filayo Bangiga Aduunka. Sidoo kale waxaa jira dakhli ay wasaaraddu ka fileyso gobolada Hayland, Gardafuu iyo Sanaag, kuwaasoo horey aan canshuuro looga qaadi jirin.
Puntland oo 19-sanno maamul ahayd ayaa miisaaniyadeedu aad u yartahay. Dakhliga ugu badana waxa uu kasoo xaroodaa dekada weyn ee magaalada Boosaaso oo il dhaqaale u ah Puntland.
November 18, 2017 Baarlamaanka Soomaaliya oo isku raacay in dhiibistii Qalbi-dhagax ee Itoobiya ay ahayd ‘sharci daro’
November 17, 2016 Gaalkacyo: Khilaaf ka taagan kala qaadida ciidamada Puntland iyo Galmudug
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo Rex Tillerson u magacaabay xoghayaha arrimaha dibada
Al-Shabab vows to assassinate newly elected parliamentarians
Unknown gunmen wounded deputy prosecutor of Somalia’s military court
Mogadishu-(Puntland Mirror) Unknown gunmen have shot and wounded the deputy prosecutor of Somalia’s military court Abdullahi Hussein Mohamed also known as “Mayonge” in the Somali capital Mogadishu, eyewitnesses said. According to the eyewitnesses the [...]
Puntland’s long-serving director general of MOF fired
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland President Said Abdullahi Deni sacked the director general of the ministry of finance Abdirizak Mohamed Hassan, who has been in office for several years. Faisal Abdullahi Warsame was appointed as the new [...]
Ciidamada ammaanka Puntland oo wariye ku xiray Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Puntland ayaa wariye maxali ah ku xiray gudaha magaalada Garoowe, sida warsidaha Puntland Mirror ay u xaqiijiyeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah. Axmed Cali Kilwe, oo ah tifaftiraha mareegta Puntland One ayaa [...]